Best 24 Finger Tattoos Chirongwa Chimiro Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Finger Tattoos Chirongwa Chimiro Kwevarume nevakadzi
Ndeipi nguva yekupedzisira iwe wakaona munhu ane tattoo yemunwe? Zvinyorwa zvemafungiro zvishomanana zvemattoos zvakanakisisa izvo ani zvake anogona kuva nazvo. Ivo vakanaka uye vaduku uye haafaniri kutora kunze kuti vataure chirevo chikuru asi ivo nguva dzose vakanaka kuona. Kune hutano hwakaenzana uye maumbirwo ayo aya anouya nematoto.
1. Romantic finger tattoo chimiro chevarume
A # nyanzvi yekugadzira mhando yakadai seyi inoita mutsauko wose kana iwe ukaiwana pachikamu chakanaka chemuviri wako. Kune nzvimbo dzakawanda apo iwe unogona kuwana mimwe yako tattoo. Mutengo wekuwana inki unobva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe.
2. Ribbon finger tattoo ink kune vakaroorana vaduku
Ichi ndicho chikonzero nei iwe uchifanira kutora nguva kutarisa unyanzvi hwemhanzi waunoda kusarudza. Chimwe chakabatwa zvakashata #tattoo inogona kuva chinhu chinotyisa kune humwe munhu.
3. chiremwaremwa muto we tattoo design pfungwa yevasikana
Iwe unogara sei kure nemufananidzo wakaipa? Kutsvakurudza uye kubvunza vatengi vekare. Dzimwe nguva, izvi zvingasava nyore kana iwe usingazivi chaizvo zvauri kuda.
4. Finger tattoo nemashoko; Rudo rwevasikana
Mufananidzo wemunwe wega # udhu hwakaita seizvi hunoita mutsauko wose paunouwana pane chikamu chakanaka chemuviri wako. Kune nzvimbo dzakawanda apo iwe unogona kuwana mimwe yako tattoo. Mutengo wekuwana inki unobva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe.
5. Zviratidzo zvakasiyana-siyana muto we tattoo pfungwa yevakomana
Usati watora tattoo yemunwe seyakanaka seiyi, tora nguva yekuongorora mhando dzakawanda uye mavara kuti zvigadzirwa zvinogona kuuya neIndaneti. Vanhu vazhinji vefashoni vanoita izvi vanoita izvi kuti vaone kuti vanozviita maererano nekuravira kwavo.
6. Kusiyana mapuraneti finger tattoo pfungwa yevarume
Mutori wemunwe unouya nenzira yakasiyana uye mavara. Iwe ndiwe unofanirwa kusarudza kubva pakati pemiti yakawanda iri kunze uko.
7. Cute chipingo uye kuda munwe wakagadzirwa ne messagee, wakaropafadzwa
Mitezo yose yemuviri inokwanisa kukodzera mucherechedzo wekunyora. Takaona vanhu vakawanda vachitora iyi tattoo yemunwe uye vanoichinja kuva chimwe chinhu chinoshamisa pamitumbi yavo.
8. Skulls, anchor and muchinjikwa finger tattoo ink for boys
Nzvimbo yekutanga yekutanga inking a tattoo yemunwe kana iwe uri kuita iyo nguva yokutanga ndeyokutanga neshanduro duku. Izvi zvichakubatsira kuti uone kana iwe uchinetseka nemunwe we tattoo kana iwe uchida kubvisa.
9. Zvinoshamisa zviratidzo zvidhori tattoo design yevakadzi
Chigunwe chechigunwe zvachose chakaoma kubvisa uye dzimwe nguva, chinogona kusiya mitsara kana isina kuitwa nehanya. Vanhu vakawanda vari kuedza neminwe tattoo vanowanzoshandisa iyo yenguva pfupi.
10. Super cute finger tattoo zvakanyanya nokuda kwevasikana
11. Cute small lotus tattoo design idea pakati pomunwe
Mukana wekutora semunwe wakaita wakanaka zvinoshamisa. Apo iwe unoda kusarudza tattoo yemunwe saizvozvi, iva nechokwadi chokuti une murairi anonakidza pane unyanzvi hwake.
12. mwoyo, kutsvoda uye kuda minwe tattoo kuvasikana
Nehuwandu hwevanhu vanobatana nebasa rekunyora mifananidzo, zvinogona kunge zvakaoma kusarudza mufananidzo wakanaka.
13. Skulls nemwarikadzi wemunwe tattoo mazano kuvanhu
Kana iwe uri kufunga nezvekuita zvinoshamisa zvidhori zviduku, iwe unogona kuenda kune imwe yerineni inonakidza. Inogona kuva mumhando yezvinyorwa kana mifananidzo. Mufananidzo wacho anogona kuatora kumusoro kana kunyange kumativi eminwe yako. image source
14. Cute ribbon finger tattoo ink for women
Kuwana tattoo yeminwe kwakava chimiro munyika yose kuti kunyange avo vasiri vateveri vematoto vanovada pavanoona imwe. Sezvo zviduku sezvavanokwanisa kutarisa, zvakanaka uye zvinopa muchengeti mararamiro anoyevedza asingakwanisi kuwana. image source
15. Lovely zizi muto we tattoo design pfungwa yevasikana
Iwe unogona kunge uri kunetseka kuti zvinorevei izvi zvidhori zvemunwe zviri. Iyo tattoo inoreva kusvika mberi kwekuona uye chic kuzvipira izvo munhu anoshandisa. image source
16. Romantic finger finger tattoo idea with message, shh ...
Kana iwe ukashandisa munwe tattoo, inoratidza rutendo, chido kana tarenda inotaura pasina iwe uchiita. Iwe unogona kuwana tattoos dzakanakisisa kana wagadzirira. Iko kunodengenyeka, kunoshamisa uye kushandiswa kwemaitiro emhando dzakasiyana siyana dzaunogona kusarudza kubva. image source
17. Skull of cow finger tattoo ink idea
Hazvina mhosva kuti unotenda chii kana kuti chii chawakagadzirira kuchinja, mifananidzo yemunwe ichaenda nenzira yakareba pakuita izvozvo iwe. image source
18. Ship finger finger tattoo design pfungwa yevarume
Vashandi vanoziva kuti vasvike vauya kuzoziva nehuyu rudzi rwechiratidzo. Takaona vanhu vakawanda dhimwe mifananidzo yakasiyana yemunwe inonzwisisika. image source
19. Amazing reindeer finger tattoo design
Apo iwe unoda kumira mumhomho yevanhu, fanana nemumwe wako waunofambidzana naye, unobvumirana nekutenda kwako uye unoda kutaura iyo nyaya isingawanzo nenzira duku. image source
20. Zvakasiyana skulls tattoo design kuvanhu
Zvidhori zvemavara zvinogona kuva zvinotyisa kana iwe uri rudzi runotyisa. image source
21. mwedzi uye nguva yemunwe tattoo ink kuvakadzi
Hapana chinhu chausingakwanisi kuita nematotori paminwe yako. Inogona kubviswa nyore nyore nokuti iri pane chikamu chemuviri umo vanhu vazhinji vangave vasina kuona nyore kuchinja pavanenge vapedza. image source
22. Kutonhora rose flower tattoo pfungwa yevarume
Sei uchida tattoo yemunwe? image source
23. Zviratidzo uye maumbirwe neminwe mifananidzo yakagadzirwa nevarume
Cherechedza mazano akawanda aunogona kushandisa; izvo zvataurwa iwe unogona kuita; runako runouya nekuva navo uye rudzi rwemufaro runouya nekuva nehupi hwezvigadzirwa. image source
24. Simple ingwe finger tattoo pfungwa yevasikana
cherry blossom tattootattoos for girlsinfinity tattoohanzvadzi tattoosoctopus tattootattoo ideascross tattoosmehndi designkoi fish tattoozuva tattoostattoos kuvanhuFeather Tattooneck tattooskorona tattoosAnchor tattooswatercolor tattooarm tattooscat tattoosmaoko tattoosHeart Tattoosmwedzi tattooselephant tattooshamwari yakanakisisa tattoosmimhanzi tattoosback tattoosbirds tattooshenna tattoocompass tattoocouple tattooszodiac zviratidzo zviratidzoangel tattoostattoo yezisoscorpion tattoochifuva tattoosrip tattoostribal tattoosshumba tattoorose tattoosflower tattooseagle tattoosrudo tattoosarrow tattoofoot tattoosbutterfly tattoosdiamond tattooAnkle Tattooscute tattoosGeometric Tattoossleeve tattooslotus flower tattoo